> Resource > Talooyin > Wedding Photo Sharing - Sida loo sawiro Wedding la Dadka More
Ka dib markii maalintii arooska weyn, waa in aad qaadatay tan oo sawiro aroos si ay u xafidi macaan arooska xusuus. Hadda, ay timaado xalliso sawirada iyo iyaga qoyska iyo saaxiibada wadaagaan.
Waxaa jira siyaabo badan oo sawiro aroos , sida iyaga uploading in a goobaha la wadaago sawir arooska, sida Flickr, Photobucket, Pictoma, iwm Qaar ka mid ah goobaha la wadaago sawir arooska gelineya inaad xaalkaa photos aad arooska ka dib markii uploading loo gaaro waxtarka fiican.
Sida xaqiiqada ah, lagu wadaago sawiro arooska online waa hab fiican oo dad badan wadaagaan xusuustaada arooska macaan. Ma waxaad u malayseen oo ku saabsan siyaabo kale oo ay ku wadaagaan arooska sawiro ama aad weligaa is ku saabsan sida loo sawiro arooska hab soo jiidasho badan si fudud u rara sawirada gal internetka? Halkan waxaan ku bixiyo xal dhowr qaybsiga sawir arooska fiican iyo ilaalinta.
Siyaabaha soo jiidasho leh si ay u wadaagaan arooska sawiro
1. Ka dhig slideshow photo aroos
Dooro arooska wanaagsan qaar ka mid ah sawirrada oo waxaad ka samaysaa slideshow photo arooska ah ka dibna wadaagaan slideshow ku YouTube, Facebook, iwm waa hab fiican si ay u wadaagaan arooska sawiro. Iyadoo Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe, si aad u tayo sare leh heer sare arooska filimada noqon kartaa arooska sawiro la dhisay-in Hababka movie Holly qoryo lacag la'aan ah. A pack style arooska waxaa gaar ahaan loogu talagalay dadka isticmaala arooska ku kaamilo filimada sawir arooska inay sawiro arooska hab fiican. Intaa waxaa dheer, Hababka 3D iyo kala guurka waxaa la bixiyaa! Ka sokow, waxaad gubi karaa movie sawir arooska inay DVD disc la DVD bedeley arooska qurux badan oo soo daawadaan TV-ga iyo DVD ciyaaryahan kasta. In aad qoyska iyo saaxiibada diri kartaa disc DVD arooska. Ku leeyahay, waa hab moodada ee la wadaago sawir arooska.
2. Samee slideshow flash arooska
Haddii aad leedahay blog ah oo aad rabto inaad la wadaagto aad arooska sawiro aad blog, markaas arooska sawir qaybsiga hab wanaagsan oo aad u noqon doonaa. Kulmiya sawirada arooska iyo heeso aroos, ka dibna aad u hesho flash slideshow ka gaare ugu fiican - Wondershare Flash Gallery Factory Deluxe , waxaad samayn kartaa a flash slideshow arooska leh xirfad arrimo arooska ee qasabno! No xirfadaha flash waxaa looga baahan yahay. Waxaad sameyn kartaa guurka iyo mooshin saamaynta u soo qaado arooska weli photos nolosha!
Ka dib markii slideshow flash arooska, aad u wadaagi karaan on Facebook, Twitter, MySpace, Blog & websites. Wixii la wadaago sawir arooska, taas oo gabi ahaanba waa hab wanaagsan.
3. DIY sawrirrada aroos ah
Sidee ku saabsan samaynta sawrirrada aroos la qoraalka, qurxinta, iwm iyo daabacaadda sawrirrada ka soo? Waxaad kartaa diray sawrirrada arooska qoyska iyo saaxiibada ama wadaagaan sawrirrada arooska digital online.